August 2020 - Lupyo News
August 31, 2020 by Lupyo News
၁၁နှစ်သမီးငယ်လေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရင်းလျှော့ခ်ဖြစ်ကာ နေရာမှာပင်သေဆုံးသွား စိတ်မကောင်းစရာပါ ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါ …..ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယခရိုင် မဟာရတ်မြို့ကအသက် (၁၁ ) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကို ကျောင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီး … သိပ်မကြားဘူး ကလေးက ” ရင်ဘတ်အောင့်တယ် အောင့်တယ် ” ဆိုပြီး အန်တယ် …သိပ်မကြာပါဘူး ကလေးက သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပုံမှန်ဘာရောဂါအခံမှလည်းမရှိဘူးလို့မိဘတွေကရေးသားထားပါတယ် ။ ဘာ့ကြောင့်သေဆုံးတာလဲလို့မည်သူမှမှတ်ချက်မပေးထားပါဘူး ။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ယခုလို လိုက်ပြီးထိုးကြတဲ့အခါ ကလေးမှာ Fever ရှိနေလား ? မရှိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature မစမ်းသပ်မိတာလား တော့မသိပါဘူး ၊ ကလေးဟာအဖျားအနည်းငယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်. ၊ … Read more
ဗိုင်းရပ်စ်က တုပ်ကွေးဖျားသလိုပဲ အားပျော့သွားနိုင်တယ်တဲ့ ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုတော့ ကြားရပါပြီ
ဗိုင်းရပ်စ်က တုပ်ကွေးဖျားသလိုပဲ အားပျော့သွားနိုင်တယ်တဲ့ ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုတော့ ကြားရပါပြီ။ ဝမ်းသာစရာသတင်း တစ်ခုတော့ ကြားရပါပြီ။ အခုကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာလို့ အများပြည်သူစိတ်ပူပင်သောကတွေရောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ရောဂါပိုး (ဗိုင်းရပ်စ်) ဟာမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလာပါတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုတော့များမယ်၊ ရောဂါပြင်းထန်နှုန်း ကစိုးရိမ်စရာမရှိနိုင်ဘဲပုံမှန် တုပ်ကွေးဖျားသလိုပဲ အားပျော့သွားနိုင်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက သုံးသပ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွာရန်တင်း (Q )ထား တဲ့ မူဝါဒေတြပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေတော့ကြားနေရပါတယ်။ ပါမောက္ခဆရာကြီများ၊ ဆရာဝ န်ကြီး အမ်ားစုက နေပြည်တော်သို့ တင်ပြကြသောကြောင့် မကြာမှီ ကွာရန်တင်း ၂ ပတ်သာ ပြန်ဖြစ်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ ကွာရန်တင်း အမ်ားစုကိုလဲ နေအိ မ်တွင်သာ home qu ara ntine HQ လုပ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ Swab ယူတိုင်းလဲ မ … Read more
တူလေးရဲ့ မျက်လုံးကို ကုသနိုင်မယ့် ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဒီအင်တာဗျူးလေးကို တွေ့သွားဖို့ မျော်လင့်မိတယ်လို့ မျက်ရည်တွေကြားကပြောလာ
August 30, 2020 by Lupyo News
တူလေးရဲ့ မျက်လုံးကို ကုသနိုင်မယ့် ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဒီအင်တာဗျူးလေးကို တွေ့သွားဖို့ မျော်လင့်မိတယ်လို့ မျက်ရည်တွေကြားကပြောလာ Channel 7လိုင်းမှာ ထုတ်လွင့်တဲ့Money Drop Myanmar အစီစဉ်ကို ပရိသတ် တွေ သိကြမှာပါနော်။ ဒီအစီစဉ်မှာ သာမန်လူတွေတောင် ဆုရဖို့ ခဲယင်းလှပါတယ်။ အမြင်အာရုံ ချို့တဲ့သူလေး ဖ်ြစ်တဲ့ မောင်ကောင်းမြတ်သူကတော့ အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့ရာမှာ သိန်း၂၀နဲ့ Winner ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။ အမြင်အာရုံချို့တဲ့‌‌ပေမယ့် နာမည်ကြီး ရုပ်သံအစီစဉ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Money Drop Myanmar မှာ ဆုကြေးငွေ သိန်း၂၀ကျပ်ဖြစ် Winner ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ မောင်ကောင်းမြတ်ကျော် နဲ့အင်တာဗျူး ခဏတာ………….အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။ ” ဒီအင်တာဗျူး‌လေးကို ကျေးဇူးရှင် တစ်ယောက်ယောက်များ ကြည့်မိလို့ရှိရင် မျက်စိကိုပြန်မြင်အောင် အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မယ့် ဆရာဝန်ကြီးပေါ်လာပါစေလို့ … Read more
သံတမန်တစ်ဦးအဖြစ် ဖြူဖြူထွေး ခန့်အပ်ခံလိုက်ရပြီ
သံတမန်တစ်ဦးအဖြစ် ဖြူဖြူထွေး ခန့်အပ်ခံလိုက်ရပြီ ဖြူဖြူထွေးဟာ ရိုးသားကြိုးစားပြီး စိတ်ရင်းကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ကြော်ငြာပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်သလို ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီးတွေကိုလည်း လှူဒါန်းမှုတွေ လုပ်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်…. အဲဒီလို ပရဟိတစိတ်ရှိမှု စိတ်ထားကောင်းမှုတွေကြောင့် ပိုပိုပြီး အောင်မြင်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်.. ခုဆိုရင်လည်း အားလုံးကချစ်ကြတဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာ ရန်ကုန်အသက်မွေးနည်းပညာကောလိပ် ပညာရေးမြှင့်တင်မှု အတွက် YVCT Kindness Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခံလိုက်ရပါတယ်… ဒီအကြောင်းလေးကို ဖြူဖြူထွေးက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်.. “ရန်ကုန်အသက်မွေးနည်းပညာကောလိပ်ပညာရေးမြှင့်တင်မှု အတွက် YVCT Kindness Ambassador ခန့်အပ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်…” ခုလို ပညာရေးကဏ္ဍမှာ Kindness Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရလို့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဂုဏ်ပြုနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်… ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း … Read more
နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်အတုနဲ့ ရွှေဆိုင်အနုကြမ်းစီးမှု ( ရုပ် သံ )
August 29, 2020 by Lupyo News
နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်အတုနဲ့ ရွှေဆိုင်အနုကြမ်းစီးမှု ( ရုပ် သံ ) နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်အတုနဲ့ ရွှေဆိုင်အနုကြမ်းစီးမှု သြဂုတ်(၂၉) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်မြို့မှာ ညနေခင်းအချိန် သေနတ်အတုနဲ့ ရွှေဆိုင်အနုကြမ်းစီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားခံနှစ်ဦးကို ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေနဲ့ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပဲ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၉ရက်၊ညနေ ၅နာရီခန့်က ပြည်မြို့၊ရွှေကူရပ်ကွက်၊ပန်းပဲတန်းလမ်းနဲ့ သံတစ်ချောင်းလမ်းထောင့်က မေ့သရဖူရွှေဆိုင်ကို သဲကုန်းအုပ်စု၊ ဆင်ပိုက်ရွာက၊ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ပြည့်ဖြိုးအောင်နဲ့ ထက်ဇော်အောင် ဆိုသူ နှစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး သေနတ်နဲ့ချိန်ကာ အရောင်းကောင်တာထဲက ရွှေလက်ဝတ်လက်စားတွေ လုယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို ရပ်ကွက်နေလူထုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာ ချက်ခြင်းပဲဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမယောက်ျားကိုလည်း သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်ပြစ်တယ်။ ကျမတို့ကိုလည်းစပရေးနဲ့ဖျန်းတယ်လို့ အနုကြမ်းစီးခံရတဲ့ဆိုင်သူဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ တရားခံဖြစ်သူနှစ်ဦးကို ပြည်မြို့က အမှတ် (၁)ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ထားရှိပြီး အရေးယူမှုတွေ … Read more
လှချင်ရက်စက်စက်ယို ကျားဟော်မုန်းဆေးမှာသောက်မိပြီး နှုတ်ခမ်းမွေး ထွက်သွားရတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် အဖြစ် (ရုပ်/သံ)
လှချင်ရက်စက်စက်ယို ကျားဟော်မုန်းဆေးမှာသောက်မိပြီး နှုတ်ခမ်းမွေး ထွက်သွားရတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် အဖြစ် (ရုပ်/သံ) ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ရှင်ယွန်းမြတ်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ မြင်သူတိုင်း ၂ ခါပြန်ကြည့်ရလောက်တဲ့ အလှအပတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ယောက်ျားလေးပရိတ်သတ် အများအပြားရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားသူလေးပါနော်။ သူမကတော့ ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့အတွက် gym ကစားတဲ့အခါ အမောဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ရာအတွက် ဆေးသောက်ရာမှ မှားယွင်းခဲ့တာကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ မီဒီယာများမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ” သောက်မိတဲ့ဆေးက ကိုယ် အခုဆော့နေတဲ့ gym က ရောင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ခင်မင်ရတဲ့ gym trainer အကိုတစ်ယောက်က သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်တတ်တဲ့သူပါ။ သူက … Read more
“အကြွေး သိန်း (၂၀) ပြန်မဆပ်ရင်တောင် အလှူတွေလုပ်ပြီး ဇာတ်ပို့တွေကိုအလုပ်ပေးနေတဲ့သူကို သွားမစော်ကားပါနဲ့” လို့ မင်းခန့်ကျော်ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ နေဒွေး
“အကွှေး သိနျး (၂၀) ပွနျမဆပျရငျတောငျ အလှူတှလေုပျပွီး ဇာတျပို့တှကေိုအလုပျပေးနတေဲ့သူကို သှားမစျောကားပါနဲ့” လို့ မငျးခနျ့ကြျောကို ဒဲ့ပွောလိုကျတဲ့ နဒှေေး သရုပျဆောငျ နဒှေေးကတော့ ဗီဒီယို ဇာတျကားတှမှော ပါဝငျ သရုပျဆောငျရငျး မွို့ပရိသတျ၊ နယျပရိသတျအစုံရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နဒှေေးကတော့ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာ ရရှိခဲ့သလို အမှုအခငျးပွဿနာအခြို့နဲ့လညျး ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီားကျ မငျးခနျ့ကြျောကို သူပိုငျဆိုငျ တဲ့ ဇာတျကားနှဈကား ဖွနျ့ခြီရောငျးခဖြို့ ပေးခဲ့ပမေယျ့ ဇာတျကား တနျဖိုးငှမြေားကို ပွနျလညျ မရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ငှရေေးကွေးရေး ပွဿနာတှလေညျး ရှိခဲ့သေးပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ နဒှေေးကတော့ သူရစရာရှိတဲ့ ငှတှေကေို ပွနျလညျမပေးအပျသေးတဲ့ အဆိုပါ ဒါရိုကျတာ သိစရေနျ သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ စာမကျြနှာကနေ အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။ “ကိုယျတှလေညျး အခုတလော … Read more
ဖြုဖြုထွေးကို ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာ ပြောပြီ (ရုပ်/သံ)
ဖြုဖြုထွေးကို ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာ ပြောပြီ (ရုပ်/သံ) မင်းခန့်ကျော် ဘာကြောင့် ဖြူထွေး ကို ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ခဲ့လဲLIKE တွေ၊ FOLLOWER တွေ တိုးအောင်လုပ်ပြီး၊ ပရိသတ် Attention အာရုံစိုက်မှု ခံချင်တဲ့ စိတ်မရှိဘူး။ ကျနော်တို့က နဂိုကတည်းက ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ သူတွေပါ။ ဆယ်လီ ဆိုတာ ဖြစ်ချင်လို့ ဝေဖန် ပြောဆို တိုက်ခိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆယ်လီ ဆိုတာ ဖြစ်ချင်ခဲ့ရင် ဖင်ချွတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပြမယ်။ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးကဒ် ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ သူတောင်းစား မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ပြောတာပါ လို့ ဖြူဖြူထွေး ကို နာမည်ထည့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးမှာ တိုင်းကြားခံခဲ့ရတဲ့ အပေါ် ပြောလာသူ … Read more
ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ညီမလေးကို ကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ နှုတ်ပိတ်နေရတဲ့ အကိုတစ်ယောက်ရဲ့ (ရုပ်/သံ)
ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ညီမလေးကို ကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ နှုတ်ပိတ်နေရတဲ့ အကိုတစ်ယောက်ရဲ့ (ရုပ်/သံ) သေဆုံးခါနီး ညီမလေးကို ဝမ်းနည်းမူများစွာဖြင့် နူတ်ဆက်နေတဲ့ အကိုဖြစ်သူ(ရုပ်သံ) ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ လာရာလမ်းကို ပြန်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါ။ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါသွားရမယ်မသိပေမယ့် လာလမ်းကိုပြန်ကြရမှာ လောကနိယာမပါပဲ။ ဒီVidoeဖိုင်လေးထဲမာဆိုရင်ဖြင့် သေဆုံးသွားတဲ့ညီမလေးကို ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် နူတ်တက်နေတဲ့ အကိုဖြစ်သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ကြည့်ရူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကပုံလေးမဆိုရင်ဖြင့် နွေးထွေးစွာပွေ့ဖက်ထညးတဲ့ အကိုဖြစ်သူရဲ့ပုံလေးနဲ့ ချစ်စရာ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို တွေ့မြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတိူ့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုပုံလေးပါနော် ဆေးရုံပေါ်မှာ ရောဂါကုသနေတဲ့ ကလေးမရဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ကိုယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရစဉ်မှာ ​ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေကို နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံကြပီး သာယာလှပတဲ့ ဘဝတွေကို တည်ဆောက်နိင်ကြပါစေဗျာ။ အပေါ်ကပုံလေးကတော့ ရောဂါ ခံစားရပီး သေဆုံးခါနီး ညီမလေးကို မနူတ်ဆက်ချငိပေမဲ့ … Read more
အွန်လိုင်း မှာ နာမည်ကြီး သွားတဲ့ ရေကျော်ဈေး ကိစ္စဖြစ် ရပ်မှန် ထွတ်ပေါ်လာ
August 28, 2020 by Lupyo News
အွန်လိုင်း မှာ နာမည်ကြီး သွားတဲ့ ရေကျော်ဈေး ကိစ္စဖြစ် ရပ်မှန် ထွတ်ပေါ်လာ ရေကျော်ဈေး ကိစ္စဖြစ်ရပ်မှန် ပြန်ပြင် ပြောပါမယ်။ ဆွဲကြိုးဖြတ်တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ကောင်မလေး က အိမ်သာခန်း ထဲမှာ ဖုံးကျန်ခဲ့တာတဲ့၊ ဖုံးကျန်ခဲ့လို့ ပြန်ယူတဲ့အချိန်မှာ အိမ်သာခန်း ထဲမှာရှိတဲ့ အဘွားကြီးက (စောက်စည်းကမ်းမရှိဘူး) ပြောလို့ ကောင်မလေးက စိတ်ဆိုးပြီး ရန်ပြန်ဖြစ်၊ လူခြင်းနပန်းလုံးကြတော့ အဘွားကြီးရဲ့ မျက်မှန် ကျိုးသွားပါတယ်။ ကျိုးသွားတဲ့ မျက်မှန်ရိုးနဲ့ ကောင်မလေးက ပြန်ထိုးလို့ သွေးတွေ ထွက် လူတွေဝိုင်းအုံလာကြတာပါ။ ဆွဲကြိုးဖြတ်တယ် ထင်ကြတာပါတဲ့။ အသက်ကြီး တဲ့ လူကြီးများလည်း ပါးစပ်စည်းကမ်းစောင့်ကြပါ။ လူငယ်များလည်း စိတ်လျော့ကြပါ။ Crd ============= unicode အှနျလိုငျး မှာ နာမညျကွီး သှားတဲ့ … Read more